အမြန်ကိုးကားစရာလမ်းညွှန် | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
ဤစာရွက်စာတမ်းသည်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအတွက်အမြန်ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးစာဖတ်ခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းတို့တွင်အစားထိုးခြင်းအနေဖြင့်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ ပြီးပြည့်စုံသောနွယ်ဖွားစစ်ဆင်ရေးလက်စွဲစာအုပ် ၎င်း၏တစ်ခုလုံးကို၌တည်၏။ Perfect Descent Auto Belays များမတပ်ဆင်မီနှင့်အသုံးပြုခြင်းမပြုမီလက်စွဲစာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပြီး ၀ န်ထမ်းများနှင့်အခြားတာဝန်ရှိသူများထံအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏ပုံမှန်ဝိသေသလက္ခဏာများအပြင်ဘက်တွင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိသောမည်သည့်ယူနစ်ကိုမဆို ၀ န်ဆောင်မှုမှချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပြီး၎င်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာသို့ပြန်မပို့မချင်းသင့်လျော်သောကိရိယာကိုသီးသန့်ဖယ်ထားပါ။
လက်စွဲစာအုပ်ကို download လုပ်ပါ: https://www.perfectdescent.com/manuals
လက်မှတ်ရ / လိုက်နာရန်စာရွက်စာတမ်းများကို download လုပ်ပါ: https://www.perfectdescent.com/certifications
Authorized Resellers ကိုရှာပါ: https://www.perfectdescent.com/resellers
Perfect Descent Auto Belays သည်တရားဝင် service center မှအခါအားလျော်စွာထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ auto belay ကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန်ပျက်ကွက်ပါကမည်သည့်အာမခံချက်ကိုမဆိုပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများကိုသိသာသောအန္တရာယ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
Perfect Descent Auto သည်ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်လုပ်မည့်နေ့နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်၊ class A အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ပုံမှန်စာမေးပွဲလိုအပ်သည် အနည်းဆုံး ၁၂ လလျှင်တစ်ကြိမ်။ ဤတူညီသောကြားကာလသည် Class A အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့်မည်သည့်အဟောင်းမော်ဒယ်နှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။
Perfect Descent Auto ကားဇယား ၂၀၂၀ နှင့်အစောပိုင်းထုတ်လုပ်မှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းaနှင့်အတူရောင်းချခဲ့သည် အတန်းအစား C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ပုံမှန်စာမေးပွဲလိုအပ်သည် အနည်းဆုံး ၁၂ လလျှင်တစ်ကြိမ်.
Periodic စာမေးပွဲအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြားသည်ယူနစ်တစ်ခုအားထပ်မံအတည်ပြုခြင်းမပြုမီသက်တမ်းကုန်ဆုံးသင့်သောအချိန်ပမာဏဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုမြင့်မားသောယူနစ်များ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုသောယူနစ်များမကြာခဏစာမေးပွဲများလိုအပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Auto Belay ကိုဖြုတ်ခြင်း
သင်၏ box နှင့်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းအတွက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုသိမ်းထားပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုအော်တို belay မှတ်ပုံတင်ပါ https://www.perfectdescent.com/product-registration/ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ၊ ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ သီးသန့်ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုပထမ ဦး ဆုံးလက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။
အလွန်အကျွံ lanyard အရှည်နှင့်အတူယူနစ်မလှုပ်မရှားသို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာနွယ်ဖွားနိုင်သည့်မလျော်ကန်သော lanyard spooling ကြုံတွေ့လိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းနီးကပ်နေသည့် lanyard ကိုအမြဲရွေးပါ။ နံရံတိုများ၌ရှည်သော lanyards ကိုမသုံးပါနှင့်။
အသုံးပြုသူသည်အောက်ဖော်ပြပါမြင့်မားသောအမြင့်ကိုထားရှိရန်ရှည်လျားသော lanyards များကိုတိုတောင်းသော lanyards များဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
ယူနစ်စနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်တိုတောင်းသော lanyard ကိုရှည်လျားသော lanyard ဖြင့်ဘယ်တော့မှအစားထိုးပါ။ ရှည်လျားသော lanyards ကို C-3 Manufacturing သို့မဟုတ်တရားဝင် service center မှသာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်တပ်ဆင်ရန်အမြင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲပုဒ်မ 2.0 ကိုဖတ်ပါ။
ဘယ်မှာ Install လုပ်ပါ
အိမ်အားဒေါင်လိုက်နှင့် lanyard nozz ကိုအောက်ဘက်သို့ ဦး တည်ကာရည်ရွယ်သည့်ဆင်းသက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် auto belay ကိုတပ်ဆင်ပါ။ အဆိုပါ lanyard တောင်တက်မြို့ရိုးသို့မဟုတ်တောင်တက်ရရှိသောအားဖြင့်အဆီးအတားဆွဲထားသင့်သည်နှင့်ချွန်ထက်အနားကျော်ရှောက်သွားသို့မဟုတ်မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွဲသို့မဟုတ်ဆင်းသက်စဉ်အတွင်းရရှိထားသူခွင့်မပြုသင့်ပါတယ်။ lanyard လက်ကိုင်ထားသို့မဟုတ်အခြားအတားအဆီးနောက်ကွယ်မှနေသေးတယ်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းအန္တရာယ်ရှိသည်အဘယ်မှာရှိအော်တို belay ကို install ဘယ်တော့မှမ။
တောင်တက်သမားကိုယူနစ်အထက်မတက်စေရန်တားဆီးသည့်နည်းဖြင့်အလိုအလျောက် Belay ကိုတပ်ဆင်ပါ။
နံရံ၏အမြင့်သည် lanyard ၏အရှည်ထက်မကျော်လွန်စေနှင့်တောင်တက်သမားများက max ကိုအရှည်ထက်ကျော်လွန်သော lanyard အားအတင်းအကျပ်မထုတ်ယူနိုင်အောင်သေချာပါစေ။
ချည်မျှင်သည်အခြားတောင်တက်သမားတစ် ဦး ၏လမ်းကြောင်းအောက်၊ အောက်သို့သွားရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
ခုန်ခြင်းစသည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုထပ်ခါထပ်ခါဖိအားပေးနိုင်သောပုံစံဖြင့် auto belay ကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ထပ်ခါတလဲလဲတုန်လှုပ်စေသောဝန်များသည်အရှိန်မြှင့်ဆင်းနှုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Perfect Descent Climbing System ကိုဘယ်သောအခါမျှမတပ်ဆင်ရ။
ကိစ္စရပ်များအားလုံးနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုမှုမတိုင်မီ Perfect Descent Auto Belays နှင့်တွဲသုံးသောကျောက်ဆူးများကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး (သို့) တူညီသောအရည်အချင်းရှိသူကစစ်ဆေးသင့်သည်။ ၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးဝန်စွမ်းအားနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ချက်များ၊ သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများ။
Key ကို Installation ထည့်သွင်းစဉ်းစား
Perfect Descent နှင့်အတူညွှန်ကြားချက်အမှတ်အသားကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ပါ။ Brake Housing သည်နံရံနှင့်ဝေးနေပါ။
အလိုအလျောက် belay ကိုတပ်ဆင်ခြင်းလက်ကိုင်ပေါ်ရှိပူးတွဲဖိုင်များ သုံး၍ သာတပ်ဆင်ရမည်။ device ကိုအမြဲတမ်းဖြောင့်စွာတပ်ပါ။ lanyard nozzle သည်တောင်တက်လမ်းကြောင်းနှင့်အညီအောက်သို့ညွှန်ပြနေသည်။
ကြမ်းတမ်းသောအသက်တာအတွက်၊ ခိုင်မာသောခိုင်မာသောနည်းဗျူဟာများကိုရှောင်ပါ။ တပ်ဆင်လိုသောတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းသည်တပ်ဆင်ထားသောလက်ကိုင်၏အလယ်မျက်လုံးကို အသုံးပြု၍ ယူနစ်အားအဝေးမှဖယ်ရှားထားသောမျက်လုံးတစ်လုံးနှင့် တွဲ၍ ဒုတိယအကြိမ်ဆက်သွယ်မှုချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်ယူနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာချိတ်ဆွဲထားရန်ဖြစ်သည်။
ယူနစ်ကိုတပ်ဆင်သည့်အခါနံရံသို့ရောက်သောအခါသို့မဟုတ်နှစ်ဆထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါတပ်ဆင်ထားသောလက်ကိုင်၏ဆန့်ကျင်နေသော offset မျက်စိနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှစစ်ဆေးခြင်း၊ လေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်အသိပေးချက်တစ်ခုခုရှိပါကပုံမှန်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအကြံပြုပါကအော်တိုနှောင့်နှေးခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှချက်ချင်းဖယ်ရှားပြီးအကဲဖြတ်မှုအတွက်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့တင်သွင်းနိုင်သည်အထိဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကမလုံခြုံသောအခြေအနေကိုဖော်ပြပါက Perfect Descent Climbing System ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
ယူနစ်စနစ်တကျလည်ပတ်နေကြောင်းအတည်ပြုရန်နေ့တိုင်းအသုံးပြုခြင်းမပြုမီအလိုအလျောက် belay ကိုစစ်ဆေးပါ။
၎င်းကိုရပ်တန့်သည်အထိမျဉ်းကြောင်းကိုဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။ တစ် ဦး ထိန်းချုပ်ထုံးစံ၌ပြန်အိမ်ရာသို့လိုင်းပြန်သွားပါ။
၂ ကီလိုဂရမ် (၄.၅ ပေါင်) ပိုသော static retraction force အားအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသော lanyard အရှည်၏အနည်းဆုံး ၆၅% တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် retraction system ၏သင့်လျော်သော function ကိုစစ်ဆေးပါ။
ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက် carabiner (s) များကိုစစ်ဆေးပြီးတံခါးနှင့်သော့ခတ်ယန္တရား၏သင့်တော်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပါ။
wear နှင့်ပျက်စီးခြင်းအတွက် lanyard ကိုစစ်ဆေးပါ (အပိုင်း ၁၃.၇ ကိုကြည့်ပါ) နှင့် ၁-၁.၅ မီတာ (၃-၅ ပေ) ၏အတိုချုံ့မှုအားဖြင့်သင့်တော်သောဘရိတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။
နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းပြီးဆုံးသည်နှင့်အလွန်ရှည်လျားသော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ပျက်စီးမှုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလုံးကိုတစ်လျှောက်လုံးတွင်စစ်ဆေးပါ။ အဆုံးသတ်တစ်ခုချင်းစီ၏ရပ်တန့်မှုအနီးရှိချုပ်ကိုအထူးဂရုပြုပါ (လက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်လက်မခံနိုင်သောလက်သံစွပ်ပုံဥပမာအပိုင်း ၁၃.၇ ကိုဖတ်ပါ) ။
အလွန်အကျွံ lanyard wear သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်ကျိုး, frayed, ဒါမှမဟုတ်ပျောက်နေချည်ချုပ်, lanyard အစားထိုးနိုင်ပါတယ်သည်အထိမည်သည့်ယူနစ်အသုံးပြုမှုမှဖယ်ရှားပါ။
ထုတ်လွှတ်သောအခါ carabiner စနစ်တကျနှင့်အလိုအလျောက်ပိတ်ပြီးသော့ခတ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
အိမ်ရာပေါ်မှာရှိသမျှစွဲစေတသမတ်တည်းထိုင်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြု; မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်မလျော်ကန်စွာအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်သည်ကိုအတည်ပြုပါ။
သိုလှောင်ထားသည့်နေရာသည်ပျက်စီးခြင်း၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းမရှိခြင်းနှင့်တပ်ဆင်သောလက်ကိုင်နှင့်ချည်မျှင်ပြွန်များသည်အလွန်အကျွံဝတ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ပမာဏကြီးမားသောအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့နေသောယူနစ်များကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းကိုပိုမိုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ အခြေအနေများ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပြင်းထန်မှု၊ အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ထိတွေ့မှုအချိန်များအပေါ် အခြေခံ၍ အော်ပရေတာအဖွဲ့အစည်း၏စစ်ဆေးမှုကြိမ်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ရမည်။
တရားဝင်စစ်ဆေးခြင်းပြီးဆုံးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲစာအုပ်၏ရည်ညွှန်းအပိုင်း ၁၃.၃ ။
တောင်တက်သမားတစ် ဦး သည်တောင်တက်ခြင်းမပြုမီအလိုအလျောက် belay နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မေ့သွားနိုင်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန် belay ဂိတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
အလေးချိန် ၁၁.၅-၁၄၀ ကီလိုဂရမ် (၂၅ ပေါင်မှ ၃၁၀ ပေါင်) ရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မှထိုကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်အတည်ပြုထားသည်။
အခြားအရေးပါသောအသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည့်စက်ကိရိယာများကဲ့သို့ပင်တောင်တက်သမားများအား auto belays များကိုဘေးကင်းစွာအသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားရမည်။
သင်၏စက်ရုံတွင်အလိုအလျောက်နှောင့်နှေးခြင်းကိုအထူးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စံသတ်မှတ်ထားသောလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းတွင်အလိုအလျောက် belay များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူ၏အရည်အချင်းကိုတိုင်းတာရန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လိုအပ်ချက်များပါဝင်သင့်သည်။
လေ့ကျင့်ထားသောနှင့်အရည်အချင်းရှိသောလူတစ် ဦး ၏လက်ဖြင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုမပါဘဲသင့်လျော်သောညွှန်ကြားချက်ကိုမရရှိသူမည်သူမဆို Auto belays ကိုမသုံးသင့်ပါ။
တောင်တက်သမားများသည်ပျော့ပျောင်းသောလိုင်းပေါ်လာရန်ခွင့်မပြုသင့်ပါ။ လွတ်လပ်သောကျဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော slack line သည်တောင်တက်သမားအားပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စေနိုင်သည်။ တောင်တက်သမားများကိုမျောပါလာသည့်အခါမျောပါလာသည့်ပျော့ပျောင်းမှုကိုရှာဖွေရန်ညွှန်ကြားသင့်သည်။ လိုင်းလိုင်းဖြစ်လျှင်ချက်ချင်းတက်ခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်၊ နံရံတွင်ရပ်နေပြီးအော်ပရေတာကိုအကြောင်းကြားသင့်သည်။
လည်ပတ်ချိန်အတွင်း၊ ဘီလာဂိတ် သို့မဟုတ်မြို့ရိုး၏အခြေစိုက်စခန်းအနီးအလားတူဆက်သွယ်မှုအချက်။ ပေါ့ပါးသော tag များလိုင်းများအား lanyard ကိုအပြည့်အ ၀ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အနေအထားသို့ရောက်ရန်နှင့်သိုလှောင်မှုတိုးချဲ့ရန်အသုံးပြုသင့်သည်။ အသုံးပြုခြင်းမပြုမီတောင်တက်ရာနေရာမှ tag လိုင်းများကိုအမြဲဖယ်ရှားပါ။ သတိမပြုမိပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
ယူနစ်သို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသောစိုစွတ်သော lanyard နှင့်အတူ device ကိုသိုလှောင်ဘယ်တော့မှမ။ စိုစွတ်သောကြောင်များပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းမပြုလုပ်မီခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
COVID ပရိုတိုကောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသတ်ဆေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ဒီမှာ.
မြေသားဖြူ၊ အညစ်အကြေးနှင့်အခြားညစ်ညမ်းမှုများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် auto belay housing ကိုသန့်ရှင်းသော၊ စိုစွတ်သောအထည်ဖြင့်ပုံမှန်သန့်ရှင်းပါ။
အကြီးစားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနမှသာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယူနစ်ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
lanyard သည်သန့်ရှင်းအေးမြ။ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားတဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းခြင်းမှကင်းဝေးပြီး lanyard တံဆိပ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်လုပ်သည့် နေ့မှစ၍ ၅ နှစ်အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
မြည်းကြိုးကိုဖြည်ခြင်းနှင့်မြေဖြူတွေသုံးပြီးဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် (carniners များကိုနူးညံ့သောဆပ်ပြာဖြင့်နွေးအောင် သုံး၍ သန့်ရှင်းနိုင်သည်) တံခါးပေါက်ပတ္တာ၊ ဆုံလည်နှင့်အပေါ့စားစက် (3-IN-ONE) ကဲ့သို့ကော်လာကိုသော့ခတ်ခြင်းမပြုမီ lanyard carabiner ကိုထိန်းသိမ်းပါ။ အားလုံးရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများအကြားရေနံသို့မဟုတ် Cam Lube) ။
ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်နေသောမည်သည့် auto belay ကိုမဆို service မှဖယ်ထုတ်ပြီးအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသော service center သို့ပြန်မရောက်မချင်းသင့်လျော်သောပစ္စည်းကို quarantine ။
ရံဖန်ရံခါ, lanyard ယူနစ်အတွင်း၌လိမ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ Speed ​​Drive lanyard သည် unguided ကို device ထဲသို့ပြန်ခေါ်သောအခါဤသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မျဉ်းကြောင်းအတွင်းမှမည်သည့်လှည့်ကွက်များကိုမဆိုဖယ်ရှားရန် lanyard တစ်ခုလုံးကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ယူပြီးပေါ့ပါးသော tag line ကို အသုံးပြု၍ lanyard ကိုပြန်လည်ဖြုတ်ချပြီးသောအနေအထားသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းညွှန်ပါ။
Perfect Descents သည်အဆိတ်ငြိမ်အော်တိုကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းထုတ်လွှတ်သော Decibel အဆင့်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တည်နေရာနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တွဲဖက်မှုအားဖြင့်ပိုမိုများပြားနိုင်သည်။
သိသိသာသာပွတ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိတ်ခြင်းဆူညံသံများသည်အတွင်းပိုင်းပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မရသောနည်းပညာရှင်မှစစ်ဆေးပြီးသည်အထိ၎င်းကိုချက်ချင်းအသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်ချက်ချင်းအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်ယူနစ်တစ်ခု၏ဥပမာကိုသင်ကြားနိုင်သည် ဒီမှာ.
ယူနစ်၏တပ်ဆင်ထားသောအမြင့်ထက်သိသိသာသာပိုရှည်သော lanyard ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မတော်လျော်သော spool ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့် mounting အမြင့်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည့် lanyard အရှည်ကို အသုံးပြု၍ ယူနစ်များကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။ နံရံတိုများ၌ရှည်လျားသော lanyards ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ လျောက်ပတ်သောလှိုင်းထနေသောသို့မဟုတ်ပုံမှန်ထက် ပို၍ မြန်လျှင် lanyard spooling စစ်ဆေးရန်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ လည်ပတ်မှုနေ့ရက်တိုင်းမတိုင်မီဇွဲမတည့်မှုနှင့်အတူယူနစ်များပေါ်တွင် lanyard spooling စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ၅.၅ မီတာ (၁၈ ပေ) အောက်အမြင့်တွင် auto belay ကိုတပ်ဆင်သောအခါအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။
ပုံပျက်သောသို့မဟုတ်အခြားပျက်စီးမှုအတွက် carabiner ကိုစစ်ဆေးပါ။ သန့်ရှင်းသောစိုစွတ်သောအထည်ကိုအသုံးပြုပြီးမြေဖြူမြေဖြူများနှင့်အပျက်အစီးများကို carabiner မှဆေးကြောပါ။ အလွန်အမင်းညစ်ပတ်သော carabiners များအတွက်နွေးထွေးသောရေနှင့်ညင်ညင်သာသာဆေးကြောသန့်စင်ရန်လိုအပ်သည်။ ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောအပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားရန်ဖိအားပေးသောလေကိုသုံးပါ။ တံခါး၊ ပတ္တာ၊ ဆုံလည်နှင့် 3-IN-ONE သို့မဟုတ် Cam-Lube ကဲ့သို့သောစက်စက်ဆီဖြင့်ကော်လာကိုဂရုစိုက်ပါ။ ချောဆီကိုနိုင်လွန်သံကြိုးနှင့်ထိတွေ့ရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်၊ သော့ခတ်ဂိတ်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးချောဆီကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ရန်အကြိမ်ကြိမ်လည်ပတ်သည်။ တံခါးဝကိုစစ်ဆေးပြီးစနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါက lanyard ကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။